Ụfọdụ ndị na enyere anyị aka ịghọta nke na-abịa tọhapụ
January 10, 2010 site na rịọ 4 Comments
Na-esote version na-aga na-agụnye ụfọdụ bara uru mgbanwe ahụ odeakwukwo akụkụ, tumadi anyị Switched ka asynchronous loading anyị edemede na ina loading ọzọ scripts mee n'ime (dị ka jQuery UI, Google Asụgharịa API, Microsoft Asụgharịa API na ndị ọzọ).
Mgbanwe pụtara na peeji nke ibu nke ukwuu kpu ya na-aghọ ndị ọzọ mere ha. Ọzọkwa hangups e mere ngwa ngwa loading nke ọzọ scripts (ndị dị otú ahụ dị ka onye kọrọ a ahụhụ) a ga-tutu amama.
Nke a na-ufụn nwekwara ike ịgụnye mmelite na Jquery 1.4 e nwere ọtụtụ ihe ngwa ngwa engine, ma ebe ọ bụ na ọ na-planed maka ntọhapụ na January 14, anyị na-ele anya nyak ke 15th.
Tupu ntọhapụ na-ama na-agba ọsọ a na saịtị, mere ma ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ọ bụla na a sụgharịrị nke ibe, biko agwa anyị na.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi Akpado Na: Jquery, ọsọ nkwalite
January 11, 2010 na 12:26 na
Ndewo! Nwere ike wijetị si “aha” dezie? Ọtụtụ wijetị yiri ka nwere editable aha. Ma m nwere ike ịhụ onye na Transposh. Ọ ga-ekwe omume ka ndị aha? Lee screenshot: https://apex.box.net/shared/static/q8ty57vob7.png
January 11, 2010 na 1:08 na
Daalụ, ga-atụkwasịkwara na todo ndepụta
January 10, 2011 na 8:36 obi
jụụ wijetị. Mgbe ga-adị ọhụrụ egosi?
January 10, 2011 na 9:37 obi
Na-esonụ ụbọchị ole na ole, elekọta ịsụgharị ya na gị na asụsụ?
Tiketi #328 (svn repo) emechi July 1, 2018
Tiketi #328 (svn repo) kere July 1, 2018
Changeset na Transposh-wordpress [7ef2701]: Ihe na zuru version kwesịrị ịnọ na zuru version June 27, 2018
Changeset na Transposh-wordpress [97c2380]: v1.0.1 ntọhapụ bụ nso June 27, 2018
Kismet na Version 1.0.0 – The oge eruwo